Ɔde Kɔmaa Romafo 11:1-36
Wampo Israel korakora (1-16)
Ngodua ho mfatoho no (17-32)
Onyankopɔn nyansa mu dɔ (33-36)
11 Afei merebisa sɛ, Onyankopɔn poo ne man anaa?+ Daabida! Efisɛ me nso meyɛ Israelni a mifi Abraham asefo* mu, na mifi Benyamin abusuakuw mu. 2 Onyankopɔn ampo ne man a odii kan yii wɔn no.*+ Nea kyerɛwnsɛm no ka fa Elia ho bere a ɔbɔɔ Israel sobo wɔ Onyankopɔn anim no, munnim anaa? 3 Ɛka sɛ: “Yehowa,* wɔakunkum w’adiyifo, na w’afɔremuka a ɛwowɔ hɔ nso, wɔadwiriw* agu. Seesei aka me nko ara, na wɔpɛ sɛ wogye me nkwa* fi me nsam.”+ 4 Nanso dɛn na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no? Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Meda so ara wɔ nnipa 7,000 a wommuu nkotodwe nsom Baal.”+ 5 Bere a yɛwom yi nso, saa ara na ɛte. Nkaefo bi wɔ hɔ+ a wɔnam adom so ayi wɔn. 6 Sɛ ɛnam adom so+ a, ɛnde na ɛnnam nnwuma so bio.+ Anyɛ saa a, anka adom no renyɛ adom bio. 7 Ɛnde dɛn na yɛbɛka? Ɛne sɛ, nea Israel ani abere rehwehwɛ no, wannya. Wɔn a wɔayi wɔn no mmom na wonyae.+ Wɔn a aka no koma apirim,+ 8 sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Onyankopɔn ama wɔn honhom a ɛma wɔda hatee,*+ wama wɔn ani a enhu ade ne aso a ɛnte asɛm, de besi nnɛ da yi.”+ 9 Afei nso, Dawid kae sɛ: “Ma wɔn adidipon nsum wɔn afiri, ma ɛnyɛ atena nyi wɔn, ma ɛnto wɔn hintidua, na ma ɛnyɛ asotwe mma wɔn. 10 Ma wɔn ani so nyɛ tumm, na wɔanhu ade, na ma wonkuntun wɔn mu daa.”+ 11 Enti merebisa sɛ, Israel hintiw ma wɔhwee ase a wɔansɔre bio anaa? Daabida! Na mmom watiriw a wɔwatiriwii no ama amanaman mufo anya nkwagye sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ Israel yaw.*+ 12 Sɛ watiriw a wɔwatiriwii no maa wiase no nyaa ne ho, na sɛ wɔn so a ɛtewee no maa amanaman no nyaa wɔn ho+ a, ɛnde sɛ wɔn dodow bɔ ano a, hwɛ sɛnea ahonyade no bɛdɔɔso! 13 Afei merekasa akyerɛ mo a moyɛ amanaman mufo no. Esiane sɛ meyɛ ɔsomafo ma amanaman no+ nti, mehyɛ me som anuonyam.+ 14 Meyɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a metumi afa kwan bi so ahuru wɔn a wɔyɛ me ara me nkurɔfo* no bo, na magye wɔn mu bi nkwa. 15 Sɛ tow a wɔtow wɔn kyenee+ no kaa wiase no ne Onyankopɔn boom a, ɛnde sɛ wogye wɔn tom a, dɛn na ɛbɛkyerɛ? Ɛbɛma wɔn a wɔawuwu no anya nkwa. 16 Bio nso, sɛ esiam a wɔafɔtɔw no fã a wɔfae sɛ aba a edi kan no yɛ kronkron a, ɛnde na nea aka no nyinaa nso yɛ kronkron; na sɛ dua no ntini yɛ kronkron a, ɛnde na saa na ne nkorabata no nso te. 17 Nanso sɛ wɔabubu dua no nkorabata no bi, ɛnna wɔde wo a woyɛ wuram ngodua ahyɛ anan ama woabenya nneɛma pa a ɛwɔ ngodua ntini mu no bi a, 18 hwɛ na woammu nkorabata no animtiaa.* Sɛ wubu wɔn animtiaa* a,+ kae sɛ ɛnyɛ wo na wukura ntini no, na mmom ntini no na ekura wo. 19 Afei wobɛka sɛ: “Wobubuu nkorabata sɛnea ɛbɛyɛ a wɔde me bɛba abetua ho.”+ 20 Ɛyɛ ampa! Gyidi a wɔannya nti na wobubuu wɔn fii so,+ na wo de, gyidi nti na wugyina hɔ.+ Mma wo ho so, na mmom suro. 21 Na sɛ dua no ankasa nkorabata mpo, Onyankopɔn ankora so a, ɛnde wo nso, ɔrenkora wo so. 22 Ɛno nti, susuw Onyankopɔn ayamye+ ne n’asotwe ho. Wɔn a wɔhwee ase no, ɔtwee wɔn aso,+ nanso wo de, sɛ wokɔ so ara tena Onyankopɔn ayamye mu a, n’ayamye wɔ hɔ ma wo. Anyɛ saa a, wo nso, wobetwa wo afi so. 23 Wɔn nso, sɛ wonya gyidi a, wɔde wɔn bɛba abetua ho,+ efisɛ Onyankopɔn betumi asan de wɔn abetua ho. 24 Nea enti a ɛte saa ne sɛ, wo mpo, wotwaa wo fii wuram ngodua ho de wo tuaa turom ngodua ho, ɛwom sɛ ɛnyɛ saa na wɔtaa yɛ no. Sɛ saa a, ɛnde wɔn a wɔyɛ turom ngodua no nkorabata de, ɛrenyɛ den koraa sɛ wɔbɛsan de wɔn abetua wɔn ankasa ngodua ho! 25 Anuanom, mepɛ sɛ muhu ahintasɛm kronkron+ yi, sɛnea ɛbɛyɛ a morenyɛ anyansafo wɔ mo ankasa ani so. Ɛne sɛ: Israel fã bi koma apirim de kosi sɛ amanaman mufo no dodow bɛso, 26 na saa kwan yi so na Israel+ nyinaa benya nkwa. Sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Ogyefo no befi Sion aba,+ na wayi amumɔyɛsɛm afi Yakob ho. 27 Na eyi ne apam a me ne wɔn bɛyɛ,+ bere a miyi wɔn bɔne fi hɔ no.”+ 28 Ampa, asɛmpa no ho de, mo nti wɔyɛ atamfo; nanso yi a Onyankopɔn ayi wɔn no ho de, wɔn agyanom nti wɔyɛ adɔfo.+ 29 Efisɛ Onyankopɔn akyɛde ne frɛ a ɔfrɛ no, ɛnyɛ nneɛma a onu ne ho wɔ ho. 30 Na sɛnea bere bi na moyɛ Onyankopɔn so asoɔden,+ nanso wɔn asoɔden nti+ afei de wɔahu mo mmɔbɔ+ no, 31 saa ara na seesei eyinom ayɛ asoɔden ama wɔahu mo mmɔbɔ, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso, afei wobehu wɔn mmɔbɔ. 32 Na Onyankopɔn ama wɔn nyinaa ayɛ nkoa ama asoɔden*+ sɛnea ɛbɛyɛ a obehu wɔn nyinaa mmɔbɔ.+ 33 O hwɛ sɛnea Onyankopɔn ahonyade ne ne nyansa ne ne nimdeɛ mu dɔ! Yɛrentumi mpɛɛpɛɛ n’atemmu mu nwie da, na yɛrentumi nhwehwɛ n’akwan mu nwie da! 34 Na “hena na onim Yehowa* adwene, anaasɛ hena na ɔyɛ ne fotufo?”+ 35 Anaa “hena na wadi kan ama no biribi a enti ɛsɛ sɛ otua n’ade ma no?”+ 36 Efisɛ ade nyinaa fi ne mu, ɛnam no so, na ɛyɛ ne dea. Ɔno na anuonyam nka no daa daa. Amen.
^ Anaa “odii kan huu wɔn siei no.”
^ Nt., “wɔatutu.”
^ Anaa “Onyankopɔn ama wɔn nnahɔɔ honhom.”
^ Anaa “ɛbɛma Israel atwe ninkunu.”
^ Nt., “me honam.”
^ Anaa “woanhoahoa wo ho wɔ nkorabata no so.”
^ Anaa “wohoahoa wo ho wɔ wɔn so.”
^ Anaa “Onyankopɔn de wɔn ahyɛ asoɔden ase.”